Unogona kundiratidza nzira mbiri dzekuzadzisa Amazon kugadzirisa nekukunda?
Ngatitarisei - vatengesi vose vanoshambadzira kuAmazon vanobatanidzwa mune dambudziko rakaoma chaizvo. Uye iyo nzira bedzi yekudzora iyo yakazara pamisika yemakambani iri kutonga Bhokisi rekutenga uye kushandisa Amazon yakakwana kugadziriswa kwezvinhu zvako zvakagadzirwa. Kana zvisina kudaro, mugove weshumba wevatengesi nguva dzose uchitsvaga kungotsvaga uye zvisingabhadharwi zvinenge zvisingashandisi kupedza nguva yakawanda inoshamisika pamusoro payo uye kusarudza kuti chii chaunofanira kusarudza kubva kune chinhu chikuru chakakwana chekuwanikwa pane uko. Uye hezvino pano maAmazon optimization anouya mukutamba! Pasi pandinoenda kuzokuratidza mazano mazano anotsigirwa nemamwe mirayiridzo yakanakisisa yekuti iwe uite maAmerica kukwanisa kufanana nepro.
Mutengo Wemusoro Wakapfuma ne Long-Tail Nyaya dzinokosha
Zvose zviri nyore pano - refu-misi mhiye kuva nehuwandu hwakawanda muAmazon optimization inogona kuva yakasimba zvikuru kana iwe uchitarisa kuisa mumutsara wako wechigadzirwa. Panguva imwe chete, tichifunga kuti vazhinji vevatengi vatoziva zvavanoda - kuvabatsira kuziva zvishandiso zvenyu vachishandisa mitsara yakareba yekutsvaga ndeye pfungwa yakanaka chaizvo, yakarurama? Uye kuti uzvipe iwe mikana yakanakisisa yekutarisa zvakanaka nekushandura vatengi vasina kusimbiswa muvatengi chaivo vandinokurudzira kushandisa chete zvakarurama uye zvakananga mazwi makuru (semuenzaniso, kusanganisira zvinhu zvakadai semuvara wegurisi kana mashizha zvingakubatsira zvikuru kukurisa kushandurwa kwako zvakashandiswa), usambozeza isa mazita mazita mumusoro wako wezvigadzirwa (kungofanirwa zvakanaka zvakanyanya kutsvaga kutsvaga mararamiro), uye usakanganwa kupiwa shanduro neAsia inoshandiswa nheyo yekodzero yekushandisa, sezvakadai Keyword Inspector, Merchant Words, Unicorn Smasher, kana AMZ Tracker.
Nzira Yakarurama yeKubvunzurudzwa Kwevatengi Kuwana
Mazuva ano, kuva nehutano hwakanaka hwevanhu hunowedzera kukosha kune zvese ecommerce online platform, kunze kweAmerica kukwanisika pachako . Uye hazvishamisi - kugutsikana kwekamberi kunotsigirwa nemashoko anofara uye kuongororwa kunowanzokurudzira vanhu kuti vabatane nechitengo. Ingochengetedza kukwana kwakanaka pakati pekupa chinokurudzira nekuita nenzira yakanyanyisa. Uye ramba uchifunga mupfungwa dzako kuti kugadziriswa kwevatengi kunonyanya kukoshesa metric, kunyanya pazvinouya pakutora chisarudzo chokupedzisira chekutenga. Ndinoreva kuti kuva nomukurumbira wakaipa nekunowanzoonekwa "vakaipa" vatengesi vanogona kuchinja zvakare chikamu cheshumba chevangangodaro vatengesi pane zvakasiyana. Kuti zvidzivirire izvi zviitiko zvinosuruvarisa, ndinokurudzira kushandisa Feedback Genius pasina mhando yekushandisa. Nenzira iyo, iwe unogona kuisa chaiyo-nguva yekuchenesa kuti urambe uchirondedzerwa pamusoro pekutarisa kwose kwevatengi kunoshuva kupindura nokukurumidza. Panguva imwe chete, kuratidzira kuda kwako uye kutarisana nenyaya dzese dzisina kunaka zvisati zvakukuvadza bhizinesi rako rose rekutengesa nguva dzose richagara rakasarudzwa zvakanaka, rakarurama? Mushure mezvose, kushandisa kukurukurirana kukuru kune vanotengi vachapa vakawanda vevashanyi yako chidimbu chepfungwa - mutengesi ari kutarisira zvakanakira mumwe nomumwe mutengi kutenga kune uko Source .